प्राय: सोधिने प्रश्नहरू (FAQs) | पाउण्डस्लोट्स क्यासिनो
प्राय: सोधिने प्रश्नहरू (FAQs)
तपाइँको गेमि experience अनुभवलाई रमाईलो बनाउन मद्दतको लागि हामीले हाम्रो अनलाइन क्यासिनो खेलहरूसँग सम्बन्धित प्राय: सोधिने प्रश्नहरूको एक सूची कम्पाइल गरेका छौं। यो पृष्ठ लगातार नवीनतम क्यासिनो खेल FAQ हरूको साथ अपडेट गरिएको छ तर यदि तपाईले खोजिरहनु भएको जवाफ पाउन सक्नुहुन्न भने कृपया नहिचकिचाउनुहोस्। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
प्राय: जसो सोधिने प्रश्नहरू पढ्न सजिलोका लागि तल खण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ।
क्यासिनो प्रायः सोधिने प्रश्नहरू:
पञ्जीकरण | प्रमाणिकरण | खाताहरू | निक्षेप | फिर्ता | सीमितता | प्राविधिक | सामान्य प्रश्नहरू
क्यासिनो खेल प्रायः सोधिने प्रश्नहरू:
अनलाइन स्लटहरू | अनलाइन ब्ल्याकजेक | अनलाइन रूलेट
म कसरी सामेल हुने?
हाम्रो क्यासिनोमा सामेल हुनको लागि तपाइँले PoundSlots.com मा खेल्न दर्ता गर्नुपर्नेछ।
न्यूनतम र अधिकतम दांव के हो?
तपाईले खेल्ने खेलमा दांव भिन्न हुन्छ। कुनै खास खेलको लागि दांवहरूको बारे पत्ता लगाउन तपाईं कुनै पनि खेलबाट "मद्दत" स्क्रिन पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ र दांव, भुक्तानी, winlines र खेल नियमहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।
के म खेल्न योग्य छु?
सहभागिता मितिमा, तपाईं कानूनी स्वीकृतिको उमेर भन्दा माथि हुनुपर्दछ जुन तपाईं बसोबास गरेको इलाकामा कानून द्वारा सेट गरिएको हो, र कुनै पनि घटनामा तपाईंको उमेर १ 18 बर्ष भन्दा माथिको हुनुपर्दछ। खेलाडीहरूसँग उनीहरूको नाममा वैध भुक्तान विधि पनि हुनुपर्दछ।
शीर्ष Back मा फिर्ता
मलाई किन प्रमाणित गर्न आवश्यक छ?
युके र अन्तर्राष्ट्रिय जुवा कानूनलाई सबै प्रयोगकर्ताहरूले जुवा खाताबाट रकम फिर्ता लिन अघि प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। यो मुख्यतया मनी लान्ड्रिंगबाट बचाउनको लागि हो तर यसले प्लेयरलाई व्यक्तिहरूको खातामा गैरकानुनी रूपमा पहुँच गर्नबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
आईडीको कुन प्रकारहरू तपाइँ मलाई प्रमाणित गर्न आवश्यक छ?
PoundSlots.com तपाइँको डेबिट वा क्रेडिट कार्ड को प्रतिलिपिहरू देख्न आवश्यक पर्दछ (अगाडि मध्य with नम्बर र पछाडि खाली CV2 कोड सहित), उपयोगिता बिलहरूको प्रतिलिपिहरू ठेगानाको प्रमाणको रूपमा र फोटोग्राफिक ID जस्तै पासपोर्ट वा ड्राइभिंग इजाजतपत्र प्रयोगकर्ताको अनुहार, हस्ताक्षर र पूरा नाम देखाउँदै।
म कसरी तपाईंलाई मेरो आईडीको प्रतिलिपिहरू पठाउँछु?
पूर्ण विवरण सहितको ईमेल प्रयोगकर्तालाई के पठाउने र कहाँ पठाउने भनेर निर्देशन सहित पठाइन्छ।
प्रमाणिकरण कति समय लाग्छ?
हामीले तपाईंको कागजातहरू प्राप्त गरेको समयदेखि प्रमाणिकरणमा working कार्य दिनहरू लाग्छ।
म कसरी मेरो क्यासिनो खातामा लग इन गर्ने?
तपाइँको PoundSlots.com खातामा लग इन गर्नका लागि कृपया "लग ईन" लेबलको बाँया पट्टि लिंक प्रयोग गर्नुहोस्। यसले लगइन स्क्रिनको साथ एक नयाँ विन्डो खोल्दछ।
मैले कसरी लग इन गर्ने यदि मैले भुक्तान गरेको ईमेल ठेगाना मैले रजिस्टर गरेको छु?
यदि तपाईंले आफ्नो रेजिष्टर्ड ईमेल ठेगाना बिर्सनुभयो वा यसमा पहुँच गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईंले हाम्रो सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ग्राहक समर्थन यो रिसेट गर्न टोली।
म कसरी नयाँ पासवर्ड अनुरोध गर्दछु?
लगइन स्क्रिनबाट, तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि "बिर्सिएको पासवर्ड" शीर्षक भएको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले तपाईंको खातामा पंजीकृत ईमेल ठेगानामा तपाईंको पासवर्ड रिसेट गर्न लिंक पठाउनेछ।
म कसरी मेरो व्यक्तिगत विवरण अपडेट गर्ने?
एकचोटि क्यासिनोमा लग इन भएपछि तपाईले कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण अपडेट गर्न "मेरो खाता" लिंक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं खातामा ठेगाना वा दर्ता नाम परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईंलाई थप प्रमाणिकरण प्रदान गर्न आवश्यक पर्दछ।
मेरो क्यासिनो खाताबाट रकम निकाल्नको लागि कति समय लाग्छ?
फिर्ता अनुरोधहरू business व्यवसाय दिन भित्र प्रक्रिया गरिन्छ र एक पटक प्रशोधन गरेपछि तपाईले एक ईमेल पुष्टिकरण प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रत्येक बैंकसँग भुक्तानी प्रशोधनका लागि फरक टाइम केसल्स हुन्छ तर सामान्य रूपमा रकम तपाईंको खातामा business व्यापार दिन भित्र हुनुपर्दछ।
न्यूनतम निकासी सीमा के हो?
तार ट्रान्सफर द्वारा फिर्ता लिने / $ / € 50 को न्यूनतम सीमा छ, अन्य सबै फिर्ता निकाल्ने विधिहरूको न्यूनतम सीमा £ / $ / € 2.5 हो। तपाइँको खाता बाट निकासी बनाउने बारे मा अधिक जानकारी को लागी, कृपया हाम्रो हेर्नुहोस् क्यासिंग आउट पृष्ठ
म कसरी मेरो क्यासिनो खातामा कोष जम्मा गर्ने?
कसरी तपाइँको अनलाइन क्यासिनो खातामा धन जम्मा गर्ने बारेमा जानकारीको लागि कृपया भ्रमण गर्नुहोस् क्यासिनो जम्मा खण्ड।
तपाईं भुक्तानीको कुन विधिहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ?
हामी भिसा, मास्टरकार्ड, नेटलर र स्क्रिल भुक्तान विधिहरूको रूपमा स्वीकार गर्दछौं।
के तपाईं साइट प्रयोग गर्न चार्ज गर्नुहुन्छ?
यस साइट प्रयोग गर्नका लागि कुनै शुल्क छैन। धेरै खेलहरू नि: शुल्क खेल वा प्रत्यक्ष खेल को विकल्प प्रदान गर्दछ जहाँ तपाईं वास्तविक पैसा को लागी खेल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं सित्तैमा खेल्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई क्रेडिट कार्डको लागि पनि सोधदैनौं।
के म क्रेडिटमा खेलहरू खेल्न सक्छु?
हामी कुनै पनि खेलाडीहरूलाई क्रेडिट खाता प्रस्ताव गर्दैनौं किनकि हाम्रो इजाजत पत्रले यसलाई अनुमति दिँदैन।
म प्रत्येक दिन कति जम्मा गर्न सक्छु भनेर म कसरी सीमित गर्ने?
तपाईलाई सम्पर्क गरी दैनिक जम्मा सीमा तोक्न सक्नुहुनेछ ग्राहक समर्थन टोली, तिनीहरू तपाइँको लागी सीमा तय गर्न खुशी हुनेछन्।
एक पटक यो सेट भएपछि के म मेरो निक्षेप सीमा परिवर्तन गर्न सक्छु?
यदि तपाईं आफ्नो सीमा कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले क्यासियर भ्रमण गर्नुपर्नेछ र "डिपोजिट" ट्याब अन्तर्गत "जम्मा सीमा तोक्नुहोस्" लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्, दैनिक, साप्ताहिक र मासिक सीमा प्रविष्ट गर्नुहोस् र पुष्टि गर्न "सबमिट गर्नुहोस्" थिच्नुहोस्।
यदि तपाईं आफ्नो निक्षेप सीमा बढाउन चाहानुहुन्छ भने ग्राहक समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र नयाँ उच्च सीमा अनुरोध गर्नुहोस्। तपाई कुनै २ 24 घण्टा अवधिको बीचमा यो एकचोटि मात्र गर्न सक्नुहुनेछ।
म जुवा खेल्न ब्रेक चाहिएको खण्डमा म स्वयं बहिर्गन सक्छु?
प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रो ग्राहक समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गरेर स्वयम् बहिष्कार गर्न सक्दछन्। आत्म बहाना मा अधिक जानकारी हाम्रो मा पाउन सकिन्छ जिम्मेदार गेमि। खण्ड।
मलाई तपाईंको क्यासिनो खेलहरू खेल्न कुन स्पेसिफिकेसन कम्प्युटर चाहिन्छ?
PoundSlots.com माईक्रोसफ्ट विन्डोज अपरेटिंग सिस्टम संस्करण २००० र माथिको र फ्ल्यास संस्करण or वा माथिकोसँग काम गर्दछ। क्यासिनो सफ्टवेयरले विन्डोज 9X, 3.XX वा वेब टिभी समर्थन गर्दैन। इष्टतम परिणामहरूका लागि तपाईको मोनिटरलाई १०२24 X 686868 पिक्सेल र उच्च रंग (१ bit बिट) वा अधिक सेट गर्नुहोस्।
के म मेरो मोबाइल फोनमा खेलहरू खेल्न सक्छु?
हो, PoundSlots.com क्यासिनो तपाईंको मोबाइल फोनमा उपलब्ध छ। अब तपाईं आईफोनहरू र एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा प्ले गर्न सक्नुहुनेछ।
के तपाइँ मेरो कम्प्युटरमा कुकीज भण्डार गर्नुहुन्छ?
हाम्रो कुकी प्रयोग नीति र अन्य गोपनीयता जानकारीमा जानकारीको लागि कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् गोपनीयता पृष्ठ.
के मैले कुनै सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न आवश्यक छ?
कुनै डाउनलोड आवश्यक छैन - तपाईं हाम्रो क्यासिनो खेल अनलाइन, सुरक्षित र सुरक्षित रूपमा खेल्न सक्नुहुनेछ।
म तपाईंको क्यासिनो खेलहरूमा पहुँच गर्न सक्दिन - मैले के गर्नु पर्छ?
यदि तपाईंलाई हाम्रो क्यासिनो खेलहरूमा पहुँच गर्न कठिनाई भइरहेको छ भने यो हुन सक्छ कि तपाईं फायरवाल पछाडि हुनुहुन्छ वा तपाईंको कम्प्युटरले हाम्रो खेलहरू खेल्न न्यूनतम विशिष्टता पूरा गर्दैन। कुनै फायरवाल सफ्टवेयर बन्द गर्दै प्रयास गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं इन्टरनेटमा अन्य साइटहरूमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न तपाईंको कनेक्शनले काम गरिरहेको छ। यदि तपाईं अझै पनी समस्या भइरहेको छ भने हाम्रो प्राविधिक समर्थन टीम मद्दत गर्न सक्षम हुन सक्छ।
म कसरी मेरो खाता बन्द गर्न सक्छु?
यदि तपाईं आफ्नो अनलाइन क्यासिनो खेल खाता बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ग्राहक समर्थन टोली र तिनीहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछन्।
के मेरो व्यक्तिगत विवरणहरू तपाईंको साइटमा सुरक्षित छन्?
PoundSlots.com पछिल्लो ईन्क्रिप्शन र सुरक्षा टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ, यो सुनिश्चित गर्न तपाईको वित्तीय जानकारी पूर्ण सुरक्षित छ। साइट सुरक्षा र गोपनीयता मा अधिक जानकारी हाम्रो मा पाउन सकिन्छ गोपनीयता खण्ड।
मलाई कसरी थाहा छ कि खेलहरू निष्पक्ष छन्?
हाम्रो खेलहरू द्वारा विनियमित छन् माल्टा गेमिंग प्राधिकरण, एमजीए / B2C / 231/2012 को लाइसेन्स संख्या माल्टा गेमि Authority प्राधिकरण द्वारा जारी गरिएको १th अप्रिल, २०१ on मा and is licensed and regulated in Great Britain by the Gambling Commission under account number 39335. Gambling can be addictive.
म कसरी ग्राहक समर्थनलाई सम्पर्क गर्ने?
हाम्रो ग्राहक समर्थन टोलीलाई तत्काल च्याट वा हाम्रो अनलाइन प्रयोग गरेर ईमेल द्वारा सम्पर्क गर्न सकिन्छ सम्पर्क पृष्ठ.
म कति अनलाइन स्लट खेल्न जीत गर्न सक्नुहुन्छ?
ज्याकपॉटहरू अनलाइन क्यासिनो खेलहरू बीच भिन्न हुन्छन् तर प्रगतिशील स्लट खेलहरूले धेरै खेलहरूको साथ सब भन्दा ठूलो सम्भावित जीत प्रदान गर्दछ जुन games १ मी। प्रगतिशील ज्याकपट खेलहरूको वास्तविक आकर्षण भनेको यो हो कि ज्याकपट्स कुनै पनि खण्ड खेलेर जित्न सकिन्छ त्यसैले सबैलाई ठूलो ज्याकपोट विनर हुने मौका छ।
के तपाइँसँग कुनै नि: शुल्क स्लट खेलहरू छन्?
हाम्रा धेरै अनलाईन क्यासिनो खेलहरूले "फ्रि प्ले" मोडमा खेलाडीहरूलाई खेल खेल्ने अवसर प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई भाग्यको प्रयास गर्न र वास्तविक पैसाको लागि खेल्नु अघि कसरी गेम खेल्दछ भन्ने महसुस गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
नि: शुल्क स्लट खेलहरू
खेलहरूसँग परिचित हुनको लागि र तपाईंको आफ्नै पैसाको एक पैसा जोखिममा नलगाईकन लाइन बेट्स र बोनस राउन्डहरू काम गर्ने तरिकाहरू बुझ्ने एउटा उत्तम तरिका हो।
के म मेरो अनलाइन क्यासिनो जीत जित्न सक्छु?
तपाइँको अनलाइन क्यासिनो खातामा सबै जीतहरू तपाइँको हो र कुनै पनि बिन्दुमा फिर्ता लिन सकिन्छ।
के त्यहाँ कुनै रमाईलो क्यासिनो खेलहरू छन्?
प्राय जसो क्यासिनो खेलहरू रमाईलोका लागि हुन् र धेरै घण्टा मनोरन्जन प्रदान गर्न सक्छन्। जहाँसम्म, सम्भवतः सब भन्दा रमाइलो क्यासिनो खेलहरू हाम्रो आकस्मिक खेल सेक्सनमा क्राउन र एch्कर, बेपरफेस्ट र क्याशपिलर जस्ता केही खेलहरूमा उत्कृष्ट खेलहरूसँग फेला पार्न सकिन्छ।
म अनलाइन ब्ल्याकजेक खेल्दै पैसा कमाउन सक्छु?
धेरै जसो मौकाको साथ यो अनलाइन ब्ल्याकज्याक खेल्दै पैसा कमाउन सम्भव छ। जबकि त्यहाँ ब्ल्याकजेक खेल्नका लागि धेरै रणनीतिहरू छन् केही आधारभूत नियमहरू लागू हुन्छन्: आफैंलाई बढावा नराख्नुहोस् र एक शर्त सीमामा टाँस्नुहोस् जुन तपाईंलाई खेलमा रहिरहन्छ यदि तपाईंलाई केही लगातार घाटा छ भने पनि।
के ब्ल्याकजेकमा कार्ड गणना अवैध छ?
अनलाइन ब्ल्याकजेकमा कार्ड गणना गणना सम्भव छैन किनकि परम्परागत क्यासिनो आधारित ब्ल्याकजेक खेलहरूमा प्रत्येक हात विपरीत डेक पुनः शफल हुन्छ।
तपाईं कसरी रूले अनलाइन खेल्नुहुन्छ?
अनलाइन रूलेट खेल्नु तपाईंको स्थानीय क्यासिनोमा वास्तविक रूलेट खेल्नेसँग मिल्दो छ। खेलमा रौलेट नियमहरू फरक हुन्छन्। त्यसो भए रूलेट खेल्न पत्ता लगाउने सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको प्रत्येक रूलेट खेलमा उपयोगी "मद्दत" आइकन प्रयोग गर्नु विभिन्न प्रकारका बेट्सको बारेमा पढ्नको लागि हो र कसरी तपाईको शर्त लगाउने। हाम्रो रूलेट खेलहरू सबै एक नि: शुल्क प्ले विकल्प प्रदान गर्दछ तपाईं कसरी रौलेट खेल्न कसरी पक्रन प्राप्त गर्न को लागी वास्तविक पैसाको लागि रूलेट खेल्न सुरु गर्नु अघि।
सबै भन्दा राम्रो रूले रणनीति के हो?
किनकि रौलेट एक मौकाको यादगार खेल हो त्यसोभए तपाईं जे रोलेट रणनीति प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा फरक परेको छैन गणितको जित्नको सम्भाव्यता परिवर्तन गर्न सकिदैन। जीत फार्म रूलेट प्रणाली र रणनीतिहरू जहिले पनि घर किनारा द्वारा शासित हुने छ र खेल को अनियमित प्रकृति को कारण एक रूले रणनीति रोजगार कि रणनीति रोजगार छैन जीत को समान बाधा दिन्छ।
के मँ रमाइलोको लागि मात्र रूले खेल्न सक्छु?
हाम्रो रूलेट खेल को सबै एक "नि: शुल्क खेल" विकल्प छ तपाइँ तपाइँको आफ्नो पैसा को एक जोखिम को जोखिम को बिना नै खेल को लागि निःशुल्क खेल गर्न को लागी अनुमति दिनुहुन्छ। एकचोटि तपाईं खेल कसरी खेल्नेको साथ छिटो पुग्नुभयो तपाईं कुनै पनि समयमा वास्तविक पैसाको लागि खेल्न सक्नुहुन्छ।